Bit By Bit - Abuuritaanka wada shaqeyn xooggan - 5.4.1 eBird
eBird waxay ururisaa xogta ku saabsan shimbiraha laga soo qaado; tabarrucayaashu waxay ku siin karaan miisaan aan koox koox cilmi baaris ah la wadaagi karin.
Shimbiraha ayaa meel walba jooga, farsamoyaqaankuna wuxuu jeclaan lahaa in uu ogaado meesha shimbir kasta ay tahay mid kasta. Marka la eego xogtaas oo kale ah, aqoonyahanada fanku waxay wax ka qabtaan su'aalo asaasi ah oo badan oo ku saabsan berrimadooda. Dabcan, ururinta xogtan waxay ka baxsan tahay baaxadda cilmi-baadhaha gaarka ah. Isla mar ahaantaana farsamoyaqaannada jimicsiga ah waxay doonayaan in ay helaan macluumaad faro badan oo buuxa, "birders" -kaaliyaasha oo tagaya shimbir daawashada madadaalada-waxay si joogto ah u ilaalinayaan shimbiraha waxayna diiwaangeliyaan waxa ay arkeen. Labadan bulshadood waxay leeyihiin taariikh dheer oo wada shaqeyn ah, laakiin hadda wadashaqeyntan ayaa lagu beddelay da'da digital. eBird waa mashruuc ururinta xog ururinta oo laga helo macluumaadka ka yimaada qowmiyadaha adduunka oo dhan, waxaana horay u heshay in ka badan 260 milyan shimbir shimbir ah oo ka timaadda 250,000 (Kelling, Fink, et al. 2015) .
Ka hor intaan la bilaabin eBird, macluumaadka badankood ee ay abuurtay birders ayaa diyaar u ahayn cilmi-baadhayaasha:
"Kumanaan meelood oo dunida ku yaalla ayaa maanta been abuur ah, buuga tusmooyinka, buug-warbixineed, iyo qoraallo. Kuwa naga mid ah ee ku lug leh hay'adaha shimbiraha waxay si fiican u yaqaanaan niyad-jabka dhageysiga iyo marar badan oo ku saabsan 'taariikhdeyda shimbiraha ee dabiiciga ah ee dabayaaqada' [Waxaannu garaneynaa qiimaha ay noqon karaan. Nasiib daro, waxaan sidoo kale ognahay inaanan isticmaali karin. " (Fitzpatrick et al. 2002)
Halkii ay lahaadaan xogta qiimaha leh oo aan la isticmaalin, eBird waxay u suurtagelisaa xayeysiinta si ay ugu gudbiso xog-ururin digital ah, dijitaal. Macluumaadka loo soo diro eBird waxaa ku jira lix goobood oo muhiim ah: yaa, xaggee, xaggee, noocyada nooca, intee le'eg, iyo dadaalka. Akhristayaasha aan shimbiraha ahayn, "dadaalka" waxaa loola jeedaa hababka loo isticmaalo marka la samaynayo indho-indheyn. Xogta tayada xogta ayaa bilaabaneysa xitaa kahor intaan xogta la soo dhajin. Birders oo isku dayaya in uu soo gudbiyo warbixino aan caadi aheyn - sida warbixinno ku saabsan noocyo aad u dhif ah, tirooyin aad u sarreeya, ama warbixinno aan ka baxsanayn - ayaa la calaamadiyey, bogguna wuxuu si toos ah u codsanayaa macluumaad dheeraad ah, sida sawirrada. Ka dib marka la ururiyo macluumaadkan dheeraadka ah, warbixinnada calanka ayaa loo diraa mid ka mid ah boqolaal khubaro gobol oo iskaa wax u qabso ah si ay dib u eegis dheeraad ah u sameeyaan. Ka dib markii baaritaan ay sameeyeen khabiir goboleed - oo ay ku jiraan waraaqo dheeraad ah oo la xidhiidha calaamadaha xayawaanka - warbixinnada calaamadaysan ayaa lagu tuuray ama aan la isku halleyn karin diiwaanka eBird (Kelling et al. 2012) . Diiwaanka xogta ah ee baadhitaannada la baadhay ayaa markaa la heli karaa qof kasta oo adduunka ah iyada oo la xidhiidha internet-ka, illaa iyo hadda, ku dhowaad 100 qoraallo falanqeyn ah ayaa loo isticmaalay (Bonney et al. 2014) . eBird waxay si cad u muujineysaa in dadka iskaa wax u qabso ah ay awoodaan inay soo uruuriyaan xogta ku habboon cilmi baarista dhabta ah.
Mid ka mid ah quruxda eBird waa in uu qabsado "shaqo" oo horayba u dhacda - xaaladdan, shimbirta. Muuqaalkani wuxuu u suurageliyaa mashruuca si uu u gaaro mug weyn. Si kastaba ha noqotee, "shaqada" ee ay sameysey birtaradu si sax ah uma dhiganayaan xogta loo baahan yahay fayoqobeeyayaasha. Tusaale ahaan, eBird, ururinta xogta waxaa lagu go'aamiyaa meesha ay ka mid yihiin xayawaannada, maaha goobta shimbiraha. Tani waxay ka dhigan tahay, tusaale ahaan, indha indheyntu waxay u muuqdaan inay udhow yihiin waddooyinka (Kelling et al. 2012; Kelling, Fink, et al. 2015) . Marka lagu daro isku dheelitirnaanta sinaan la'aanta goobaha, fiirinta dhabta ah ee ay sameeyeen shimbiruhu marwalba maahan mid fiican. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah xayawaanaadka ayaa kaliya ku wareejinaya macluumaadka ku saabsan noocyada ay ka fikiraan xiisaha, halkii ay ka heli lahaayeen macluumaadka dhammaan noocyada ay arkeen.
Cilmi-baadhayaasha eBird waxay leeyihiin laba xal oo muhiim ah oo ku saabsan tayada xogta tayada- kuwaas oo laga yaabo inay ku caawiyaan mashaariicda kale ee ururinta xogta. Marka hore, baarayaasha eBird ayaa si joogta ah isku dayaya inay sare u qaadaan tayada xogta ay soo gudbiyeen birders. Tusaale ahaan, eBird waxay waxbarasho u fidisaa kaqaybgalayaasha, waxayna abuurtay sawirro kasta ee xogta ka qaybgalayaasha, in ay naqshadeen, ku dhiirigeliyaan xayawaanka in ay gudbiyaan macluumaadka ku saabsan dhammaan noocyada ay arkeen, ma ahan kaliya kuwa ugu xiisaha badan (Wood et al. 2011; Wiggins 2011) . Marka labaad, cilmi baarayaasha eBird waxay isticmaalaan qaabab tirakoob oo isku dayaya in ay saxaan dabeecadda qotoda dheer ee xogta qashinka ah (Fink et al. 2010; Hurlbert and Liang 2012) . Wali ma cadda haddii mawduucyada tirakoobka ay si buuxda uga soocaan xogta, laakiin fayoqraadiyeyaashu waxay kalsooni ku qabaan tayada xogta eBird ee wax laga beddelay, sidii hore loo soo sheegay, xogahaan waxaa loo isticmaalay ku dhowaad 100 qoraallo cilmi-baaris ah.
Dhakhaatiir badan oo aan fiicnayn ayaa ugu horreyntii ka shakisnaa markii ay maqleen eBird markii ugu horreysay. Fikradayda, qayb ka mid ah shaki-galintan waxay ka timaadaa inay ka fikirto eBird si khalad ah. Dad badan ayaa marka hore ka fekeraya "Miyuu eBird-yada xogta ku fiican yahay?", Jawaabtuna waa "maya." Si kastaba ha ahaatee, taasi ma aha su'aasha saxda ah. Su'aasha saxda ah waa "Su'aalaha cilmi-baarista qaarkeed, waa xogta eBird ee ka wanaagsan tan xogta suugaanta ee hadda jirta?" Su'aashaas jawaabtu waa "haa" haa, sababtoo ah su'aalo badan oo xiiso leh - sida su'aalo ku saabsan socdaalka xajmiga xilliyeed - maahan wax kale oo suurtagal ah in la qaybiyo xog ururinta.
Mashruuca eBird wuxuu muujinayaa in ay suura gal tahay in lagu daro mutadawiciinta ururinta xogta muhiimka ah. Si kastaba ha ahaatee, mashruucyada eBird, iyo mashaariicda la xidhiidha, waxay tilmaamayaan in caqabadaha la xiriira samaynta iyo tayada xogta ay tahay walaac laga qabo mashaariicda ururinta xogta. Sida aan ku arki karno qaybta soo socota, si kastaba ha ahaatee, naqshadeynta naqshadeynta iyo tiknoolajiyada, walaacyadaasi waa la yareeyn karaa meelaha qaarkood.